अस्ट्रेलियामा एक नेपाली सहित ५ जना १० करोड अस्ट्रेलियन डलरसहित पक्राउ « Janata Times
२०७८, २० मंसिर सोमबार
अस्ट्रेलियामा एक नेपाली सहित ५ जना १० करोड अस्ट्रेलियन डलरसहित पक्राउ
एक नेपालीसहित पाँचजना स्रोत नखुलेको १० करोड अस्ट्रेलियन डलर (७ अर्ब ६१ करोड १३ लाख) सहित अस्ट्रेलियाबाट पक्राउ परेका छन् । उनीहरू अवैध तरिकाले रकम कारोबार गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् ।
सेक्युरिटी व्यापार कम्पनी खोलेका उनीहरूले विभिन्न देशबाट अवैधरूपमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको खुलेको हो । पक्राउ पर्ने नेपालीमा २९ वर्षीय विपिन थापा रहेका छन् । उनको ठेगाना भने खुलाइएको छैन । उनीसहित ३० वर्षीय गगनदीप पवा र ३० वर्षीय गोपाली दहललाई असार २६ गते पक्राउ गरेको हो ।
तीनदेखि चार वर्षको अवधिमा यो समूहले ८ देखि १० करोड अस्ट्रेलियन डलरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । अस्ट्रेलिया क्रिमिनल ग्रुप्स स्क्वाडले थापासहित गगनदीप र गोपालीलाई पक्राउ गरेको हो । यो ठूलो हुन्डी कारोबारका मुख्य अभियुक्त गगनदीप हुन् । गोपाली उनकी घरेलु साझेदार भएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीले तीनजना पक्राउ परेको केही समयपछि पुनः दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतीय र अस्ट्रेलियन नागरिक भएको स्थानीय संचारमाध्यमले जानकारी दिएका छन् । ३० वर्षीय नितिन कपिलालाई साउन ३ गते न्युजिल्यान्ड जाने क्रममा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । पाँचौँ अभियुक्त ३१ वर्षीय पञ्जाबका मनमनदिर सिंहलाई साउन ९ गते पक्राउ गरेको अस्ट्रेलिया क्रिमिनल ग्रुप्स स्क्वाडले जनाएको छ ।
उनीहरूले साउथ–वेस्ट सिड्नी, भिक्टोरिया र वेस्टन अस्ट्रेलियालाई आधार बनाएर अवैध हुन्डी कारोबार गर्दै आएका थिए । गगनदीप सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाउँमा एकै दिन स्रोत नखुलेको ४ लाख ४५ हजार डलर बैंक अफ न्यु साउथ वेल्समा जम्मा भएको थियो । उनीहरूले एकपटक ४५ हजार डलर, अर्कोपटक ५५ हजार र दुईपटक ७५\_७५ हजार डलर बैंकमा जम्मा गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनीहरूले ९ पटक गरेर १ लाख ९५ हजार डलर जम्मा गरेपछि अनुसन्धान अधिकारीहरूले उनीहरूमाथि निगरानी बढाएका थिए ।
पक्राउ गर्दा प्रहरीले उनीहरूबाट ४ लाख डलर, पैसा गन्ने मेसिन तथा ३ ओटा सवारी साधनसमेत बरामद गरेको छ । देखाउनका लागि सेक्युरिटी व्यापारको कम्पनी खडा गरी भित्रीरूपमा ठूलो रकमको अवैध कारोबार गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उनीहरूमाथि गम्भिर प्रकृतिको मुद्दा लगाइएको छ भने उनीहरूमध्ये केहीको निवदेन अदालतले खारेज गरिदिएको छ । पक्राउहरूका तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका वकिल इजाज खानका अनुसार अस्ट्रेलियाको कानुनअनुसार अभियोजन गम्भीर प्रकृतिको हो । ‘प्रहरीले लगाएको आरोपबारे प्रमाण हेर्ने काम गरिरहेको छ । ती आरोपहरू निकै खराब र गम्भीर खालका छन् । मैले अभियोजन पक्षको मुद्दाबारेमा टिप्पणी गर्नु अगाडि प्रमाणहरू हेर्न आवश्यक हुन्छ’, उनले भनेका छन् ।
गगनदीप सञ्चालक रहेको एजसियोर प्रोटेक्सन सर्भिसेसबाट यो अवैध कारोबार भएको हो । साथै पछि पक्राउ परेका सिंहका नाममा होल्डिङ पिटिवाई लिमिटेड र ओसिस प्रोटेक्टिभ सर्भिस पिटिवाई लिमिटेड नामक दुई कम्पनी रहेको भेटिएको छ । आपराधिक समूहबाट आएको रकमसमेत उनीहरूको खातामा जम्मा हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म गगनदीप यस कम्पनीको निर्देशक तथा सचिव थिए । त्यसयता भने दहल यस कम्पनीका निर्देशक र सेयर धनी रहँदै आएकी छिन् । रकम परिचालन गर्ने कार्यमा थापाको संलग्नता देखिएको छ । घटना अनुसन्धानका लागि खटिएका जासुस इन्स्पेक्टर निक रिड भन्छन्, अनुसन्धानले थप प्रमाण जुटाउनेछ । अरू केही व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्छन् ।’
एमालेको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा को-को पर्लान ? यस्तो छ सूर्य थापाको खुलासा
अनेरास्ववियुको सदस्यता वितरण महाअभियान सुरु
काठमाडौं, २० मंसिर । नेकपा (एमाले) को विद्यार्थी सङ्‍गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)
एनआरएनए अध्यक्ष पन्तबाट १५ जना प्रतिनिधि चयन
लण्डन, २० मंसिर । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विधान बमोजिम १५ जना महाधिवेशन
बैतडी जिप दुर्घटना अपडेट : मृतक संख्या चार पुग्यो, एकको अवस्था गम्भीर
सीपी लोहिया/बैतडी। बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा थप एक
आपराधिक समूहको विवादका कारण युवक बडुवाल हत्या
काठमाडौं, २० मंसिर । कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१ का युवक भूपेन्द्र बडुवालको हत्याको कारण दुई
भारत–बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन
काठमाडौं, २० मंसिर । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित
एकै गाउँका ५० जनाले किन पाएनन् नागरिकता ?
सुनसरी, २० मंसिर । ‘नेपालको संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर,
‘एरियाको दादा हुँ’ भन्दै म्यानपावर कम्पनीबाट ९० लाख असुली गर्ने दुईजना पक्राउ
काठमाडौं, २० मंसिर । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले म्यानपावर कम्पनीबाट धम्क्याउँदै रकम असुली गरेको अभियोगमा
प्रेस चौतारी उपत्यका प्रदेश कमिटीले पायो पूर्णता : अध्यक्षमा सिलवाल, महासचिवमा आचार्य
काठमाडौं, २० मंसिर । प्रेस चौतारी नेपालको उपत्यका प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हेमराज सिलवाल चयन हुनुभएको